योगेश भट्टराई तनावमा - नेपालबहस
योगेश भट्टराई तनावमा
| १३:०८:२३ मा प्रकाशित
२६ जेठ, काठमाडौं । एमालेलाई विभाजनको डिलबाट फर्काउने अभियानमा लागेका माधव नेपाल पक्षीय भनिने केही नेताहरुलाई यतिखेर ठूलै धर्मसंकट परेको छ । खासगरी योगेश भट्टराई धेरै तनावमा छन् ।
झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायत ११ जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्काशन गरिएपछि विभाजनको संघारमै पुगेको पार्टीलाई जोगाउने अभियान भट्टराईले थाले । यसक्रममा उनले गोकर्ण विष्ट र घनश्याम भूषालसँग घनिभूत छलफल थाले । लगत्तै सुरेन्द्र पाण्डेलाई समेत अभियानमा जोडियो ।
त्यसपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका नेताहरु विष्णु पौडेल, सुभाषचन्द्र नेम्बाङ, प्रदीपकुमार ज्ञवाली र विष्णु रिमालसँग छलफल गर्न कस्सिए । यसैक्रममा योगेशले प्रधानमन्त्री ओलीसँग वान टू वान टक गरे । ओलीसँग योगेशले एमालेको पुरानो संरचना व्यूँताउने गरी आह्वान गर्न आग्रह गरे । माधव नेपाललाई मिलाउने जिम्मा आफूले लिने पनि बताए । सोही बमोजिक ओलीले भोलिपल्ट अबेर ६ बूँदे आह्वानपत्र सार्वजनिक गरे ।
सर्सर्ती हेर्दा र पढ्दा ओलीले माधव पक्षले उठाएका सबै माग पूरा गर्ने इमान्दार प्रयत्न गरेको भान पर्ने गरी भाषाको प्रयोग भएको लाग्यो । ओलीको बक्तव्य आउने वित्तिकै योगेशले त्यसको स्वागत नै गरे । साथै, चार जना नेताहरुको एकमत बनाउने प्रयास थाले । तर उनीहरुले ओलीले प्रयोग गरेको भाषाको रौंकेस्रा भने केलाएनन् ।
भोलिपल्ट यसबारे छलफल गर्न बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा भीम रावल र बेदूराम भूषालले ओलीको छ बूँदे प्रस्तावको अन्तर्यको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा मात्रै योगेशलगायत नेताहरु आश्चार्यमा परे । वास्तवमा ओलीले शब्द शव्दमा खेल्न खोजेको उनीहरुले चाल पाए । त्यसपछि भने ओलीको प्रस्ताव नक्कली ,अल्मल्याउने आफैंमा फुट पैदा गर्ने उद्येश्यले ल्याइएको निश्कर्ष निकालियो । त्यसको जवाफमा नेता नेपालले प्रत्येक बूँदाको खण्डन गर्ने सहमति भयो ।
तर योगेशलगायत चारजना नेताहरु भने अब कसरी एकता जोगाउने भन्ने समस्यामा परेका छन् । अझै यसको ठूलो चोट त योगेशलाई परेको छ । ओलीले महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा नै योगेश र गोकर्णलाई ल्याउन चाहन्थे । त्यसबखत सम्भव भएन । तर ओलीको ६ बूँदे प्रस्तावपछि भने वातावरण सहज हुने अनि मात्रै योगश र गोकर्णलाई भित्र्याउने समझदारी नै बनेको थियो ।
तर त्यस्तो सहज वातावरण बनेन । त्यसैले ओली पनि अब आफ्नै बाटो लाग्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । बाँकी सात वटा मन्त्रालयमा आज भोलि नै मन्त्री थप्ने उनको तयारी छ । योगेश भने यो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा अझै अन्योल र द्विविधामै रहेका छन् ।
त्यसैले आज आफ्नो कुण्ठा पोख्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा एमालेमा एकता नहुनुको कारण उनले तीनजना शीर्ष नेतालाई देखाएका छन् ।उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – कम्रेड केपी ओलीलाई झलनाथ र माधव भन्दा महन्थ र राजेन्द्र प्यारो अनि झलनाथ र माधवलाई केपी भन्दा शेरबहादुर र प्रचण्ड प्यारो , त्यसो भएपछि कहाँ हुन्छ पार्टी एकता ?
राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दै ९ घण्टा पहिले
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी १२ घण्टा पहिले
आज जयतु संस्कृतम्को हीरक जयन्ती मनाइँदै ७ दिन पहिले
तपाईको असार महिनाको राशीफल कस्तो छ ? ७ दिन पहिले
नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न बोलायो शनिवार विशेष साधारण सभा ४ दिन पहिले
कर्णाली प्रदेशमा २६ प्रतिशत बजेट खर्च ५ दिन पहिले
महोत्तरीसहित प्रदेश २ कै शान ओल २ हप्ता पहिले
एनएमबी बैंकको बचतमा खातामा सर्वाधिक ब्याजदर, अनलाईनबाटै खाता खोल्न सकिने ३ दिन पहिले
सीडीएससीले ल्यायो ‘मेरो शेयर’को पासवर्ड मोबाइलबाट रिसेट गर्न मिल्ने सुविधा २ महिना पहिले
विपन्न परिवारका लागि फुड बैंक सञ्चालनमा १० महिना पहिले
निषेधाज्ञाका कारण बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लगिँदै २ महिना पहिले
अन्तरिक्ष केन्द्रका लागि सामान बोकेको कार्गो रकेट प्रक्षेपण ३ हप्ता पहिले